ကျူးဘားတွင်ခရစ္စမတ်ထုံးတမ်းစဉ်လာများ Absolut ခရီးသွားခြင်း
ဒံယလေက | | ကျူးဘား
ဤတိုင်းပြည်၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများကြောင့်ဖြစ်သည် ကျူးဘားတွင်ခရစ္စမတ် ၎င်းသည်အခြားလက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများမှကျင်းပသောပွဲများနှင့်အနည်းငယ်ကွာခြားသည်။ ၏ကွန်မြူနစ်အစိုးရ ဖီဒယ်ကက်စထရို သူသည်ဤပွဲကို ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင်တားမြစ်ခဲ့သော်လည်းဆယ်စုနှစ်သုံးခုအကြာတွင်ထိုကန့်သတ်ချက်ကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး Cubans များသည်သူတို့၏ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်အထိမ်းအမှတ်များကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။
ခရစ်စမတ်ကျွန်းသို့တရားဝင်တရားဝင်ပြန်လာခြင်းမှာ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးဂျွန်ပေါလ် ၂ ၏ကျူးဘားသို့အလည်အပတ်ခရီး ထို့နောက်ကျူးဘားအစိုးရသည်သန့်ရှင်းသောရှုထောင့်နှင့်ညှိနှိုင်းမှုအရဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်အားလပ်ရက်အဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်သောသူတို့၏အချစ်ဆုံးပါတီများထဲမှတစ်ခုကိုပြန်လည်ရယူလိုသောလူများကဤအကြံဥာဏ်ကိုကောင်းစွာလက်ခံခဲ့ကြသည်။
ဒါပေမဲ့ဒီကြားမှ ကျူးဘားရှိခရစ္စမတ်သည်ခြားနားသည်။ ၎င်းသည်အခြားနေရာများ၏နွေးထွေးမှုနှင့်အများအားဖြင့်၎င်း၏ဘာသာရေးဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများမှကင်းဝေးသော်လည်းပြင်းထန်သောနှင့်ရွှင်လန်းဖွယ်ကောင်းသောပုံမှန်အားဖြင့်ကျူးဘားလမ်းဖြင့်ကျင်းပသည်။ အာဏာပိုင်များသည်ပွဲတော်များကိုခွင့်ပြုသော်လည်း၎င်းတို့တွင်လည်းသူတို့မပါ ၀ င်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ခရစ်စမတ်အဆင်တန်ဆာများကိုရှာခြင်းသို့မဟုတ်ခရစ္စမတ်၏ဂီတသံများကိုနားဆင်ရန်ခဲယဉ်းသည်။ la Habana, ထရီနီဒက်, Cienfuegos o စန်တီယာဂိုဒီကျူးဘား။
1.1 အဆိုပါ Parrandas က de Remedios
1.2 Bejucal ၏ Charangas
2 ကျူးဘားတွင်ခရစ္စမတ်: gastronomy
ကျူးဘားခရစ္စမတ်အကြိုအရောင်နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်။ ဤအားလပ်ရက်၌နေထိုင်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးဥပမာကိုနေရာနှစ်နေရာတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဗီလာ Clara y Bejucal ။
အဆိုပါ Parrandas က de Remedios
အတွက်ခရစ္စမတ်မတိုင်မီတစ်ပတ်ကာလအတွင်း ဗီလာ Clara San Juan de los Remedios ၏ပွဲတော်များကိုတီထွင်သည်။ ၎င်းမှာသူတို့၏အရောင်အဆင်းဆုံးစကားရပ်ဖြစ်သည် ပါတီများကကြေငြာခဲ့သည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်၏ Intangible အမွေအနှစ် ယူနက်စကိုက။
အဆိုပါ Parrandas ၏အစဉ်အလာအကြောင်းကိုနှစ်ရာနှစ်ပေါင်းမွေးဖွားခဲ့သည်။ မြို့သူမြို့သားများခွဲခြားထားတယ် နှစ်ဖက်: အယ်လ်ကာမဲန်နှင့်ဆန်ဆာဗေးဒေါ။ အုပ်စုနှစ်ခုလုံးသည်တစ်ပတ်ပတ်လုံးအထင်ရှားဆုံးနှင့်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသော float များနှင့်ဝတ်စုံများကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်ကြိုးစားကြသည်။
ခရစ်စမတ်အကြိုညအထိဖြစ်သည် ပါတီနှစ်ခုအားတေးဂီတနှင့်မီးရှူးမီးပန်းများကိုလမ်းပေါ်မှချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်, ရစ်သမ်, ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့် showiness အတွက်ယှဉ်ပြိုင်။ နှစ် ဦး စလုံးဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ယှဉ်ပြိုင်ကြပေမယ့်ဘယ်သူမှဆုမကြေညာပါဘူး။ တစ်ခုတည်းသောရည်မှန်းချက်မှာဤဗီဒီယိုတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းပျော်ရွင်ရန်ဖြစ်သည် (စာရေးသူမှာ Juan Manuel Pacheco ဖြစ်သည်။ )
Bejucal ၏ Charangas
ဤပွဲတော်သည်ကျွန်းပေါ်တွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးကျူးဘားတွင်ခရစ်စမတ်မည်သို့နေထိုင်သည်ကိုကောင်းစွာကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည်ကိုလိုနီခေတ်နှစ်များမှစတင်ခဲ့သည်ဘုရင်များသည်သူတို့၏ကျွန်များကိုဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင်တစ်ရက်နားရက်အဖြစ်ပေးအပ်လေ့ရှိသည်။ အာဖရိကမှကျေးကျွန်လူမည်းများသည်သူတို့၏ဗုံသံကိုကခုန်ခြင်းနှင့်ရိုက်နှက်ခြင်းအားဖြင့်ဤခဏတာအနားယူခဲ့ကြသည်။
ဒီနေ့ရဲ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲများနည်းနည်းကွဲပြားခြားနားပါသည်။ မြို့ Bejucal ဖြစ်သည် ဒါကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ် ကြေးဝါကြိုးနှင့်ချည်နှောင်: တတဖကျမှာ၏ ငွေ Ceibaအပြာအရောင်နှင့်ကင်းမြီးကောက်၏သင်္ကေတများကိုသင်္ကေတများအဖြစ်ပြသပြီး၊ ရွှေဆူး, အနီရောင်နှင့်ကြက်၏ကြက်သရေနှင့်အတူနဖူးစည်းစာတန်းပျံသန်းသော။ Remedios parrandas ကဲ့သို့ပင်ခရစ္စမတ်အကြို visitors ည့်သည်အနည်းငယ်ကိုသာဆွဲဆောင်သောပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါမဟုတ်ရင်မဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့, gastronomy ကျူးဘားတွင်ခရစ်စမတ်ကျင်းပခြင်းတွင်အလွန်အရေးကြီးသောနေရာတွင်ရှိသည်။ ဤနေ့ရက်များသည်မိသားစုများနှင့်မိတ်ဆွေများသည်ဘာသာတရား၏စိတ်သဘောထားမည်သို့ပင်ရှိပါစေစားပွဲတစ်ဝိုက်တွင်စုရုံးနေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ရသောမိသားစုများအနေဖြင့်ညစာစားပွဲသည်တက်ရောက်ရန်အတွက်စောလွန်းသည် သန်းခေါင်ယံအစုလိုက်အပြုံလိုက်.
ကျွန်း၏မြို့ကြီးများစွာတွင်ညသည်ပြပွဲတစ်ခုဖြင့်နိဂုံးချုပ်သည် မီးကျည်မီးပန်း။ ထဲမှာရာအရပ်ကိုကြာသော ဟာဗာနာရှိ Paseo del Malecón။ ဒီအခိုက်အတန့်၌ပျော်မွေ့ရန်ဤအရပ်သို့လာကြသောကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များစွာရှိသည်။
ကျူးဘားခရစ်စမတ်အစားအစာ၏ကြယ်ပွင့်ပန်းကန်သည် ဝက်သားသို့မဟုတ်နို့စို့ဝက်ကင်, အဘယ်သူ၏အရေးပါမှုကို Anglo-Saxon နိုင်ငံများအတွက်ကင်ကြက်ဆင်၏ဆင်တူသည်။ အမဲသားကိုအများအားဖြင့်အမျိုးမျိုးသောဝက်အူချောင်းများနှင့်အတူလိုက်ပါသွားသည် ဆန်ဖြူ, အနက်ရောင်ပဲမျိုးစုံ, အသုပ်, ကျင်ခွက် o mojo အတွက် yuccaဤရက်စွဲများ၏ပုံမှန်ကျူးဘားခဲဖွယ်စားဖွယ်။ အချိုပွဲအပိုင်းမှာရိုးရာတွေကိုဖော်ပြရမယ် fritters နှင့် လိမ္မော်ရောင်ခွံ.
နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေသောထုံးစံမရှိပါ လက်ဆောင်တွေဖလှယ် ခရစ်စမတ်အကြိုညစာမှာမဟုတ်သလိုခရစ်စမတ်နေ့လည်စာမှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်ပါတီပွဲကိုကျူးဘားစတိုင်အစဉ်အလာအတိုင်းဂီတ၊ အကနှင့်ရောမ်များစွာဖြင့်အဆုံးသတ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ကျူးဘားတွင်ခရစ္စမတ်အစဉ်အလာ
ချစ်သူများနေ့သည် Valentine's Day ဖြစ်သည်
Sable Sable, ရုရှားတိရိစ္ဆာန်ဘဏ္asureာကို